हिमाल खबरपत्रिका | नीतिनिर्माताले कहिले बुझ्ने ?
नीतिनिर्माताले कहिले बुझ्ने ?
‘खुम्बु क्षेत्रः अथाह अवसर, न्यून लाभ’ (१२—१८ जेठ) आवरणले हाम्रै परिवेशको तर खासै वास्ता नगरिएको कुरालाई बहसमा ल्याएको छ । पर्यटनले देशको मुहारै फेर्छ भन्ने कुरा दशकौंदेखि थेगो जस्तै बनिरहँदा हामीले यसको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको तीतो यथार्थ हो । यसमा नीतिनिर्माताको प्राथमिकता नहुनु नै समस्याको जड हो । पर्यटनकै कुरा गर्दा हामीकहाँ हिमाल र त्यसमा पनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको कुरा गरिन्छ । तर, सगरमाथाको चुचुरोमा मानव पाइला पुगेको ६६ वर्ष भइसक्दा त्यसयता खुम्बु क्षेत्रबाट देश र स्थानीय समुदायले कति लाभ लिन सके त ? यसमा हिमाल ले अघि सारेको बहसलाई मनन् गर्दै पर्याप्त लाभ लिने गरिको गतिलो नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
पासाङ शेर्पा, सोलु, हालः काठमाडौं
समग्र पुनर्निर्माणले गति समातोस्
‘पुनर्निर्माणमा मनकामनाको पाठ’ (१२—१८ जेठ) ले सरकारमा बस्ने र पुनर्निर्माणमा काम गर्नेहरूको आँखा खुलेको हुनुपर्छ । अपनत्व भावले जिम्मेवारीसाथ काम गर्ने हो भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अलमलको कुरा केही पनि रहेनछ । सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समुदायको साथले धेरै भरथेग गर्ने कुरा मनकामना मन्दिरको पुनर्निर्माण बेलैमा पूरा भएको उदाहरणले देखाएको छ । ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा विभिन्न देशको आर्थिक सहयोगमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । स्तम्भकारले उल्लेख गरे झैं हाम्रो सम्पदा निर्माणमा आफ्नै कौशल, सामग्री र निर्माणकर्मी प्रयोगमा बढावा दिनु उचित हुन्छ । किनभने यी सम्पदा हाम्रो इतिहास, पौरख, पहिचान र आस्थासँग जोडिएका विषय हुन् । यद्यपि बाह्य सहयोगमा सम्पदा निर्माण गर्ने नै हो भने पनि तिनको स्थानीयपन पहिलो शर्त हुनुपर्छ । सम्पदासँगै समग्र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
विवेक पण्डित, चाबहिल, काठमाडौं
उकालो लाग्दा स्तम्भमा उठाइएको ‘बीपी–विचार र मदन–विचारको दोभान’ (१२—१८ जेठ) समयको स्वर हो । देशलाई विकास र समृद्धि पथमा हिंडाउन फरक विचार समूह र ध्रुवीकरण अवरोध जस्तै बनेको छ । बीपी कोइराला र मदन भण्डारीले बेग्लाबेग्लै राजनीतिक सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गरे पनि ती विचारभित्र रहेको देशको लोकतान्त्रिक समाजवादको अपरिहार्यता बुझ्न नसक्नु तिनका अनुयायीको कमजोरी हो । विचार केवल फरक दर्शन र कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गर्ने आधार होइन, देश र जनताको हितका लागि हुनुपर्छ । पार्टीगत विगत आफ्नो ठाउँमा छ, तर देशलाई आवश्यकता परेको बेला सबै फरक आस्थालाई किनारमा राखेर सामूहिक चिन्तन र संवाद गर्नु आजको माग हो ।
सागर कसपाल, इमाडोल, ललितपुर
चेन–होटलको आगमन सम्बन्धी रिपोर्ट ‘पंख फिजाउँदै पर्यटन’ (१२—१८ जेठ) ले आशा जगायो । भलै अधिकांश चेन होटलहरू नेपालमा पूँजी लगानी नगरी व्यवस्थापन सम्हाल्ने गरी मात्र आउन लागेका हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका नामी होटलहरू देशमा खुल्दै जाँदा यहाँको पर्यटनको सम्भावना थप फराकिलो हुने कुरामा द्विविधा छैन । यससँगै दीर्घकालीन अवसरको लेखाजोखा गरेर मात्र लगानी गरिने होटल व्यवसायमा थपिइरहेको पूँजी पर्यटन उद्योगले आगामी दिनमा फड्को मार्ने सूचक पनि हो ।
सरिष्मा सेन, चितवन
हिम्मतलाई सलाम !
‘उदीयमान युवा खेलाडीः लक्ष्य यू–१९’ (१२—१८ जेठ) रिपोर्टमा क्रिकेटका भर्भराउँदो उमेरका खेलाडीको कथा–व्यथा पढेर मन अमिलो भयो । हाम्रा युवा खेलाडीले विभिन्न प्रतियोगितामा आफूलाई अब्बल साबित गरे पनि तिनको प्रतिभा संरक्षणमा बेवास्ता गरिंदा धेरै जना पलायन हुनुपरेको छ । खेलाडीको जग सानै उमेरदेखि व्यवस्थित प्रशिक्षणले बन्ने हो । यसैले १६ वर्षमुनिका खेलाडीको प्रतिभा र क्षमता तिखार्न निरन्तर विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । खेलाडीलाई नियमित रूपमा भइरहने प्रतियोगिताले ऊर्जा भर्दै तम्तयार अवस्थामा राख्छ । तर, तीन वर्षयता नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा रहँदा खेलाडीले आक्कलझुक्कल हुने प्रतियोगिता पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था विडम्बना हो । यो अवस्थामा यू–१९ टोलीबाट खेल्ने सपना सजाउँदै धेरैजसो खेलाडीले सीमित स्रोत–साधनमा प्रशिक्षण लिइरहेका रहेछन् । यति हुँदाहुँदै पनि तमाम चुनौतीलाई सामना गर्दै भविष्यमा राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने हिम्मत सँगाल्ने यी तन्नेरी खेलाडीलाई सलाम !
निरु महर्जन, भत्तपुर